डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO • सबै डचटाउन नेबरहुडको बारेमा • DutchtownSTL.org
डचटाउन सेन्ट लुइस, मिसौरीको दक्षिण पक्षमा छ। डचटाउन छिमेक सबैभन्दा जनसंख्या र भौगोलिक रूपमा शहरको 79 neighborhood वटा नजिकको सब भन्दा ठूलो ठाउँ हो। डचटाउन एक विविध जनसंख्या, विभिन्न ऐतिहासिक वास्तुकला, विभिन्न शहर पार्क, र सबै प्रकारको पसल, रेस्टुरेन्ट, र अन्य व्यवसायहरूको घर छ।
के सामान्यतया "डचटाउन" को रूपमा संकेत गरीन्छ को सीमाहरु धेरै अस्पष्ट छन्। सेन्ट लुइस को शहर केहि धेरै विशिष्ट सीमानाहरू परिभाषित गर्दछ। तर वरपरका संकेतहरूले तपाईंलाई भन्नेछन् कि "तपाईं डचटाउनमा हुनुहुन्छ" जब तपाईं वास्तवमा ग्रेभोज पार्क, माउन्ट प्लेइजन्ट, वा समुद्री विलामा हुनुहुन्छ। यहाँ डचटाउनस्टेल, हामी अनुमानित डचटाउन उत्तरमा चेरोकी स्ट्रिट वा चिप्पेवा स्ट्रिट, दक्षिणमा बेट्स स्ट्रीट, पूर्वमा मिसिसिपी नदी, र पश्चिममा मिसौरी प्रशान्त रेलमार्गको बीचमा सबै कुरा हुन सक्छौं।
"डचटाउन" नाम सेन्ट लुइस-शैली "Deutsch" को गलत अर्थमा आधारित छ, जो जर्मन आप्रवासीहरू थिए जसले १ the औं शताब्दीको उत्तरार्धमा दक्षिणपूर्व सेन्ट लुइसको यो विशाल swath निर्माण र निर्माण गरे। डचटाउनको नाम हालैका दशकहरूमा समातिएको छ, तर धेरै मानिसहरू अझै यसलाई "दक्षिण पक्ष" भन्ने गर्छन्।
डचटाउनको वाणिज्यिक कोरिडोरहरू र मुख्य ड्र्यागहरू
2020 मा, डचटाउन मुख्य सडकहरू सँग साझेदारी बनायो मिसौरी मुख्य सडक जडान लागि सेन्ट लुइस मुख्य सडक पहल डाउनटाउन डचटाउन र वरपरका वाणिज्यिक गलियाराहरु को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, र पर्यावरणीय भलाई सुदृढ गर्न।
डाउनटाउन डचटाउन: मेरामेक स्ट्रिट
ग्रान्ड बोलेभार्डको पूर्वमा मेरामेक स्ट्रिटलाई "डाउनटाउन डचटाउन" भनेर चिनिन्छ। छिमेकको व्यवसायिक स्ट्रिपले क्याफे र बारहरू, पुन: बिक्रि पसलहरू, र अन्य सेवाहरू प्रस्तुत गर्दछ।
मेरामेक र भर्जिनियामा तपाईले केही छिमेकको सब भन्दा बलियो एch्करहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ: Winkelmann संस औषधि १ 1913 १। पछि नै दक्षिण पश्चिमी कुनामा रहेको छ। शहरी Eats Café खाना, पेय, र सबै प्रकारको समुदाय भेला र उद्यमहरूको लागि ठाउँ प्रदान गर्दछ। र डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन वरपरको विकास र स्थायित्व गर्न र वरपरको समुदायलाई सशक्त गर्न काम गर्दछ।
ऐतिहासिक Feasting Fox भवन Meramec मा पश्चिमी स्थलचिन्ह को रूप मा कार्य गर्दछ। पूर्वी छेउमा छ पाडुआ क्याथोलिक गिर्जाघरको सेन्ट एन्थोनी, जसको जम्मा जुम्ल्याहा स्टेपलहरू सबै दक्षिण पक्षबाट देख्न सकिन्छ।
डचटाउनमा मुख्य सडकहरू।
दक्षिण ग्रान्ड बोलेभार्ड
साउथ ग्रान्ड बोउलभार्डले धेरै व्यवसायहरू आप्रवासीहरूको विविधतालाई पूरा गर्दछ जुन डचटाउन घर भन्छन्। भियतनामी रेस्टुरेन्ट, किराना र कफि पसलहरूले यस ग्रान्डको साथ, ओगटेको छ गुरुung बजार र नेपाली आप्रवासी समुदायको सेवा गर्ने अन्य पसलहरू, धेरै साना चर्चहरू, रेस्टुरेन्टहरू, र अन्य पसलहरू र कार्यालयहरूले डचटाउनको शेष साउथ ग्रान्डमा भर्दछन्।
सदाको लागि परिवर्तन हुँदै आएको समुदायलाई पुing्याउने पसलहरूको विकसित लाइनको अतिरिक्त व्यवसायहरू हुन् जसले दशकौंसम्म डचटाउन घर भन्दछन्: Merb's Candies, तिनीहरूका बायोनिक स्याउ र चकलेट-कभर स्ट्रबेरीका लागि प्रसिद्ध; यस ल्याण्डमार्क Feasting Fox भोजनालय, स्वामित्व को एक नयाँ पुस्ता प्रतीक्षा गर्दै; र अवश्य पनि टेड ड्रुज फ्रोजन कस्टर्ड - पुरानो तर कम ज्ञात स्थान, सेन्ट लुइस हिल्स स्थान हलचल गर्ने ठाउँ भन्दा छोटो लाइनहरू र सजिलो पार्किंग सुविधा। सेन्ट मेरीको क्याथोलिक हाई स्कूल र तिनीहरूको २ ac एकर क्याम्पस डेलर स्ट्रीट मा ग्रान्ड को दक्षिणी छोर मा होल्ड।
हालै मानवता सेन्ट लुइसको लागि आवास दक्षिण मुख्यालय र चिप्पेवा स्ट्रीटमा एक लामो रिक्त रिक्त ,50,000०,००० वर्ग फुटको भवन पुनर्निर्माण गरी तिनीहरूका मुख्यालय, गोदाम, र मानवता पुनः भण्डारको लागि आवासनयाँ र पुन: प्रयोज्य निर्माण सामग्री र उपकरणहरू प्रदान गर्ने एउटा आउटलेट। उत्तरमा, गार्सिया प्रोपर्टीटले भर्खरै खरीद गर्यो ग्रान्डभ्यू आर्केड भवन दशकौं रिक्तिको पछि पुनर्विकासको लागि ग्रेभोजी पार्कमा।
चिप्पेवा स्ट्रिट, ग्रेभोजी पार्क र डचटाउन उचित बीचको आधिकारिक सीमा, हालका दशकहरूमा विनिवेशबाट ग्रस्त छ। यद्यपि समुदाय विकास उठ्नुहोस् र लुथरन विकास समूहको $ १.12..XNUMX मिलियन चिप्पेवा पार्क परियोजना चिप्पेवा वा वरपर पन्ध्र भवनहरूको पुनर्विकास गरेर इलाकामा खाली ठाउँ र गुणस्तरको आवास समस्याहरू समाधान गर्दैछन्। भर्खरै अपनाइएको Gravois-Jefferson ऐतिहासिक पड़ोसी योजना भविष्यको विकास योजनाको लागि आधारभूत योजना बनाउँदछ, अन्तर्-सराहना गरिएको चिप्पेवा सडकमा विशेष फोकसको साथ।
दक्षिण ब्रॉडवे / दक्षिण जेफरसन
व्यवसायको एक विस्तृत वर्गीकरण दक्षिण ब्रॉडवे र दक्षिण जेफरसनको साथ आधारित छ, जो चिप्वा स्ट्रीटमा मर्ज गर्दछ। लिबर्टी हार्डवेयर, कम्प Sump, र डनको मासु बजार स्ट्रिपसँगै केहि साना व्यवसायहरू हुन्। कन्कर्डिया पब्लिशिंग हाउस यस क्षेत्रमा १ 150० भन्दा धेरै बर्षदेखि भएको छ सेन्ट अलेक्सियस अस्पतालर जर्मन सांस्कृतिक समाज क्षेत्रको प्रारम्भिक बसोबास गर्नेहरूलाई पनि हार्कन्स।
चेरोकी Street उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तदेखि नै लोकप्रिय शपिंग र मनोरन्जन गन्तव्य भएको छ। त्यस समयमा चेरोकीले साना विशेषता पसलहरूको अतिरिक्त धेरै डिपार्टमेन्ट स्टोर र थिएटरहरूको पनि होस्ट गर्थे।
चेरोकी प्राचीन पंक्ति, जेफरसन र लेम्प एभिन्यू बीचमा, लामो समयदेखि क्षेत्रीय बराबरी छ। क्याफे, आर्ट स्टुडियो र अन्य पसलहरूसहित दर्जनौं एन्टिक डीलरहरू चेरोकी स्ट्रिटको पूर्वी भागमा लाइन लगाउँछन् र सबै ओभरहरूबाट एन्टिक शिकारीहरू ल्याउँदछन्।
जेफरसनको पश्चिम, चेरोकी स्ट्रिट मेक्सिकन-अमेरिकी समुदायको लगानीबाट पुनर्जन्म भएको छ। मेक्सिकन किराना स्टोर, टेक्वेरिया, कपडा स्टोर, ब्यूटी पार्लर, र उपहार पसलहरू जेफरसनको पश्‍चिमी भागमा आइपुगे। हालसालै, चेरोकीले कलाकार र बोहेमियनहरूलाई आकर्षित गरेका छन् जुन प्रामाणिक र सस्तो शहर बसोबासको खोजीमा छन्। तिनीहरूसँग आर्ट ग्यालरीहरू, प्रदर्शन स्थानहरू, पिज्जारिया, ककटेल बारहरू, र एक मद्यपानगृह आयो। दुबै संस्कृतिहरू सँगसँगै फस्टाउँछन्, र चेरोकी स्ट्रिट अब एक लोकप्रिय भोजन गन्तव्य र रात्रि जीवन स्थल हो।
छिमेकको केन्द्रमा, कम्प्टन एभिन्यू स्ट्रडलिंग गरिएको छ मार्क्वेट पार्क। Marquette दक्षिण साइड मा सबैभन्दा ठूलो नि: शुल्क बाहिरी सार्वजनिक पूल सुविधा। भर्खरै पुनर्निर्मित मार्क्वेट पार्क फिल्ड हाउसले छिमेकीलाई हेरेर बैठक र स्वागतको लागि उत्कृष्ट ठाउँ प्रदान गर्दछ। मार्क्वेट रिक्रिएसन सेन्टरले बास्केटबल जिम सामिल गर्दछ र छिमेकी युवाहरूका लागि गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ। खेल मैदानहरू, टेनिस कोर्टहरू, र मार्केट पार्कको सुविधाहरू बाहिर मैदान मैदान।
यो मार्क्वेट पार्कको सहयोगी हालसालै गठन गरिएको संस्था हो जुन पार्कलाई पुन: सक्रिय पार्ने र यसका सुविधाहरू सुधार गर्ने लक्ष्य राख्छ। २०१ of को गर्मीमा एक कोष स .्कलनकर्ता $ 7,000 भन्दा बढी उठाइएको पोखरीमा फर्नीचर र अन्य सुविधा प्रदान गर्न। अन्य प्रयासहरूमा फुटबल सुविधाहरूमा स्तरवृद्धिहरू समावेश छन्।
मार्क्वेट पार्क को बारे मा अधिक जानकारी खोज्नुहोस्, आगामी घटनाहरू सहित, यहाँ डचटाउन STL.org मा।
थॉमस डन लर्निंग सेन्टर मिनेसोटा र ग्यासकोनादको मार्क्वेट पार्कको दक्षिण पूर्व कुनामा खडा छ। सुविधा एक कम्प्युटर प्रयोगशाला, एक कला स्टूडियो, एक प्रदर्शन रसोईघर, एक पुस्तकालय, एक सामुदायिक बगैचा, र धेरै बैठक स्पेस सुविधा। धेरै सार्वजनिक र निजी बैठकहरू र कार्यक्रमहरूको होस्टिंग बाहेक, थॉमस डनले खुला कम्प्युटर र कला प्रयोगशाला घन्टा, हिसेट (जीईडी) कक्षा, प्यारेन्टिंग शिक्षा, वित्तीय परामर्श, युवा गर्मी शिविर, र अधिक पनि प्रदान गर्दछ।
कारण Marquette को उत्तर हो Gravois पार्क, जहाँबाट वरपरको छिमेकले यसको नाम लिन्छ। ग्र्याभोइस पार्क १ 1812१२ मा स्थापना भएको थियो, र अन्ततः यसको वरिपरिको छेउमा हुर्कियो। पार्कले यसको केन्द्रमा एक सुन्दर मंडप देखाउँदछ, र हालसालै नयाँ खेल मैदान निर्माण गरियो।
लाक्लेडे पार्क र मिन्नी वुड मेमोरियल स्क्वायर
पूर्वमा, लगभग एक अर्काको नजिक, छन् Laclede पार्क र मिन्नी वुड मेमोरियल स्क्वायर। मिनी वुड स्क्वायर, दक्षिण ब्रॉडवे र मेरामेकमा, त्यस कुनामा चम्किलो पहेंलो पवेलियनले छुट्याएको छ। पार्क पनि धेरै बहु-उद्देश्य खेल क्षेत्र र एक खेल मैदान सुविधा। गैसकोनेड र आयोवामा ल्याक्ले पार्कमा छिमेकी मिन्नी वुडको सुविधाहरूको अभाव छ, तर सन् १ 1812१२ मा यस संस्था स्थापना हुन पाएकोमा ठूलो भिन्नता छ। डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन तिनीहरूको स्थापना जेब पार्क का साथीहरु समुदाय इनपुट मार्फत पार्कहरूको कायाकल्प गर्न परियोजना
माउन्ट प्लीजन्ट छिमेकले तिनीहरूको नाम लिन्छ सुखद पार्क मिशिगन र डकोटा मा। यो पकेट पार्क एक रोलर हकी रिंक र एक खेल मैदान सुविधा।
एम्बरब पार्क डचटाउनको पश्चिमी भागमा छ, गुस्टिन, केओकुक, र डन्निका अवेन्समा। बेसबल हीरा, एक नयाँ खेल मैदान, र एक मर्मत गरिएको गाजेबो एम्बरब पार्कमा सुविधाहरू हुन्।
चार टोलमा डचटाउन समावेश गरीएको कुल जनसंख्या लगभग ,30,000०,००० छ। डचटाउन क्षेत्र सेन्ट लुइसको सब भन्दा सघन जनसंख्या भएको क्षेत्रहरूमा पर्छ।
डचटाउन एकदम विविध छ। धेरै जसो कालो र सेतो, लातिनो जनसंख्या छिटो बढिरहेको छ। एक लामो-स्थापित भियतनामी समुदाय र विश्व भर बाट धेरै अन्य आप्रवासीहरु पनि जनसंख्या को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउँछ। डचटाउनको जनसंख्या धेरै जवान छ, यसको १aवर्षभन्दा कम उमेरका बासिन्दाहरूको एक तिहाइ हिस्सा साथ।
यस बारे थप जान्नुहोस् डचटाउनको डेमोग्राफिक्स, अब र वर्षहरूमा।
ठूलो डचटाउन क्षेत्रको आर्किटेक्चरले सेन्ट लुइस क्षेत्रमा फेला पार्न प्रत्येक शैलीको बारेमा कभर गर्दछ। संरचनाहरू पूर्व गृहयुद्ध, दोस्रो विश्व युद्ध पछि निर्माण, र बीचमा सबै कुरा हाम्रो छिमेकमा फेला पार्न सकिन्छ। सब भन्दा पुरानो वास्तुकला सामान्यतया अर्को उत्तर र पूर्वमा छिमेकमा भेटिन्छ, तर अपवादको साथ।
घरहरू प्रायः ईट र विभिन्न प्रकारका हुन्छन् साना शटगन कामदारहरूको कुटीर र मध्यम बंगलादेखि लिएर मिसिसिपी नदीको ब्लाफमा भव्य चार वर्ग र हवेली। एकल-परिवार घरको अतिरिक्त, डुप्लेक्स र चार-परिवार भवनहरू धेरै सामान्य छन्। ठूला अपार्टमेन्ट भवनहरू छिमेकमा छिटपुट रूपमा पनि फेला पार्न सकिन्छ।
भर्जिनिया र ईडाहोमा सारस ईन्।
डचटाउन क्षेत्र ऐतिहासिक स्थानहरूको राष्ट्रिय रजिष्टरमा धेरै जिल्लाहरूमा अवस्थित छ। को Gravois-Jefferson Streetcar उपनगर ऐतिहासिक जिल्ला ग्रेभोइस पार्क र डचटाउनको उत्तरी छेउमा समेटिएको छ। को सेन्ट सेसिलिया ऐतिहासिक जिल्ला, विशेष गरी सेतो ग्लेज्ड "बेकरी ईंट" जिल्लाभर भारी प्रयोगको लागि विशेष, र डचटाउन साउथ हायsटोरिक जिल्ला डचटाउनको अधिकांश दक्षिण अन्त कभर गर्नुहोस्। को समुद्री विला पड़ोसी ऐतिहासिक जिल्ला मरीन भिल्लाको एक अंश कभर गर्दछ।
डचटाउन वरपरका धेरै व्यक्तिगत भवनहरू राष्ट्रिय दर्तामा पनि सूचीबद्ध छन्। फराकिलो राष्ट्रिय क्यान्डी कम्पनी कारखाना (हालसालै पुनर्स्थापित गरिएको र हाल घरमा U-Haul) सूचीबद्ध गरिएको छ, जस्तो छ सारस ईन् भर्जिनिया र इडाहोमा। धेरै स्कूलहरू द्वारा डिजाइन विलियम बी। इट्टनर दर्तामा देखा पर्नुहोस्, विशाल क्लेभल्याण्ड हाई स्कूल सहित। सूचीबद्ध ऐतिहासिक घरहरू समावेश गर्दछ मिल्टनबर्गर हाउस ओस्किला र मा चाटेलन डि मेनिल हाउस एन्टिक रोको अन्त्यको नजिक।
छिमेकका अन्य वास्तुगत स्ट्यान्डआउट्समा क्याथोलिक गिर्जाघरहरू पर्छन् पादुआको सेन्ट एन्थोनी र सेन्ट सेसिलिया, एन्टिक रोको पूर्व छेउमा लिम्प ब्रेउरी परिसर, र चेरोकी स्ट्रिटमा सिन्ड्रेला बिल्डिंग।
डचटाउनमा राजनीतिक उप-विभाजनहरू
ठूलो डचटाउन क्षेत्र मुख्यतया तीन सेन्ट लुइस अल्डर्मनिक वार्ड भित्र पर्छ। पश्चिमी र दक्षिणी भागहरू, २th वार्ड, प्रतिनिधित्व गर्दछ Ald। शेन कोहन। यो २th वार्ड छिमेकको उत्तरी भाग कभर गर्दछ र प्रतिनिधित्व गर्दछ Ald। कारा स्पेन्सर। असामान्य आकारको २th वार्ड, द्वारा सेवा Ald। डान गुएन्थर, उत्तर, पूर्व र दक्षिणमा केही जमिन ढाक्छ। Ald। सारा मार्टिनको ११ औं वार्ड र Ald। बेथ मर्फीको १th औं वार्ड दुबैले छिमेकको दक्षिण छेउको सानो स्लाइभर कभर गर्दछ।
तीन मिसौरी प्रतिनिधि सभा जिल्लाहरु डचटाउन कभर गर्दछ। Represented 78 औं जिल्ला, प्रतिनिधित्व गर्दछ रिप। रशीन एल्ड्रिज, छिमेकको उत्तरपूर्वी भाग कभर गर्दछ। Th० औं जिल्ला, प्रतिनिधित्व गर्दछ रिप। पीटर मेरिडिथ, डचटाउनको उत्तरपश्चिम कुनामा समावेश गर्दछ। छिमेकको दक्षिणी भाग हालको प्रतिनिधित्व गर्दै 81१ औं जिल्लामा पर्दछ रिप। स्टीव बटज। सबै छिमेकीहरू राज्य सेनेट डिस्ट्रिक्ट lies मा अवस्थित छन्, द्वारा प्रस्तुत गरिएको सेन स्टीवन रोबर्ट्स.
संघीय स्तरमा, डचटाउन द्वारा सेवा प्रदान गर्दछ अमेरिकी रिपब्लिक कोरी बुश, यु एस सेन रॉय ब्लन्ट, र अमेरिकी सेन। जोश हव्ले.
तपाइँले चयनित अधिकारीहरूको बारेमा अधिक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ, सम्पर्क जानकारी सहित हाम्रो गाईडमा डचटाउन र दक्षिण पक्षले निर्वाचित अधिकारीहरू.
को मिशन डचटाउन STL.org डचटाउन छिमेकको लागि प्रचार गर्नु हो (व्यापक रूपमा परिभाषित गरिएको) र यसको उपस्थिति, भूत, र भविष्य हाम्रा बासिन्दाहरू, छिमेकीहरू, आगन्तुकहरू, र जो कोहीले छोड्छ त्यसको साथ साझा गर्दछ।
DutchtownSTL एक अप-टू-डेट राख्दछ घटनाहरूको पात्रो, सकारात्मक प्रदान गर्नुहोस् छिमेकी समाचार, कथाहरू र तस्वीरहरू साझेदारी गर्नुहोस्, र जो कोही हाम्रो छिमेकीलाई अब बलियो बनाउन, हाम्रो छिमेकको इतिहास संरक्षण, र डचटाउन क्षेत्रको लागि उज्जवल भविष्यको प्रचार गर्न चाहने जो कोहीलाई अन्तरिक्ष प्रस्ताव गर्नुहोस्।
यदि हामी हाम्रो साइट, र हाम्रो छिमेकको बारेमा प्रचार फैलाउँन मद्दत गर्दछौं भने हामी यसलाई मन पराउछौं! हाम्रो पोष्टहरू र पृष्ठहरूमा साझेदारी लिंक क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको साथीहरूलाई डचटाउनमा के भइरहेको छ जान्नको लागि। तपाईं पनि मनपराउन, साझा गर्न र हामीलाई अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक, twitter, र इन्स्टाग्राम.
योगदान र सुझावहरू स्वागत भन्दा बढि हो। कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् सम्पर्क पृष्ठ वा इ-मेल info@dutchtownstl.org कुनै विचार वा प्रश्नहरूको साथ।
हामी के खोज्दैछौं त्यस मध्ये केहि: सकारात्मक छिमेकका समाचारहरू, घटना घोषणाहरू, समुदाय स्रोतहरू, का लागि सूचीबद्ध डचटाउन स्थानहरूको निर्देशिका, ऐतिहासिक तथ्य, फोटो, लेख, र anecdotes, व्यक्तिगत अनुभव, फोटोग्राफी, वा केहि अरू केहि। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस यदि तपाईं योगदान गर्न चाहनुहुन्छ!
डचटाउनएसएल समर्थन गर्नुहोस्
हाम्रो पोष्टहरू अनुसरण गरेर, मनपर्दा, र साझेदारी गरेर शब्द फैलाउन मद्दत गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, र इन्स्टाग्राम। जब मानिसहरूले हाम्रो काम साझा गर्छन् हामी साँच्चिकै प्रशंसा गर्दछौं।
DutchtownSTL द्वारा आंशिक रूपमा अनुदान प्राप्त गरीएको छ डचटाउन मुख्य सडकहरू र डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला. डचटाउन मुख्य सडकहरु लाई दान गर्नुहोस् साइट समर्थन गर्न।
हाम्रो पढ्नुहोस् गोपनीयता नीति र वेबसाइट नियम र सर्तहरू.
यस पृष्ठका धेरै फोटाहरू शिष्टाचारको रूपमा छन् पल सेबलम्यान.
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अक्टोबर 19th, 2021 .
डचटाउन STL.org डचटाउनको बारेमा